Ndakaita CHIRWERE CHENYERE NDOKUSVIRISA MURUME WE SISTER YANGU NO Sister wangu akusvirwa nemurume wangu – Please help – Makuhwa.co.zw
Ndiri musikana ane makore 22 years ndinogara kwaMajange kuMasvingo. Ndine mwana mukomana ane 3 months asi handina murume. Ndakange ndakaroorwa asi ndakasiyana nemurume wangu mushure mekunge tarambana. Murume wangu ndaimuda chaizvo nemoyo wangu wese asi takatadza kugarisana. Hembe dzake ndaidzigeza, chikafu ndaimubikira zvese zvaiida ndaimuitira.
Dambudziko hombe rakatanga mushure mekunge ndave nepamuviri pange pave ne 8 months. Ndakatanga kuita chirwere chekungoda kukwirwa nguva yega yega. Murume wangu akatanga achimbozama chaizvo asi ndaingoti after one hour takwirana ndainzwa kuda zvakare. Murume wangu akambotanga achimwa guchu nemapiritsi kuti awane simba rekunyatso ndikwira asi zvakashaya basa.
Ndakamboshingirira ndichiudza murume wangu kuti asaore moyo nekuti aizama chaizvo kuda kuti ndifare. Ndisati ndave nepamuviri apa taikwirana almost everyday but izvi kana neni zvaitondinetsawo nekuti pakanga pasingaperi one or two hours ndisati ndave kuda mboro. Pamba patinogara imba yatakasiirwa nevabereki vedu vasati vashaya. Pamba apa ndinogara ne sister yangu inovawo ine murume wayo musoja.
Pane rimwe zuva sister vangu vakange vasipo uyewo murume wangu akange asipo. Ndinonyatsoziva kuti murume wesister yangu anoda zvevakadzi chaizvo nekuti vanogara vakanetsana nesister yangu nenyaya dzevasikana vake vasingaperi. Ipapo ndainyatsonzwa kuda kusvirwa saka ndakaita zvivindi ndokubva ndabvisa hembe dzese ndokubva ndaenda kune musoja ndikamuudza kuti babamukuru ndinoda kusvirwa.
Shasha yakamboramba-­ramba but yakazondirova makumbo kwete zvekutamba zviya. Kubva ipapo hatina kuzombomira, takange tooita almost everyday. Manje ndakaita dambudziko one rekuti murume wangu akaona ma messages mufoni mangu aibva kuna musoja achitaura nezvekukwirana kwatange tichiita.
Murume wangu neshungu akaenda kunotaurira sister yangu tikarwa zvakaipa ne sister yangu. Manje chavekunetsa ndechekuti sister yangu ndave ne almost 4 months ndisina kutaura nayo yabva pamba. Murume akabvawo pamba haana kana kuuya kuzoona mwana since pandakazvara. Musoja paakaonawo kuti nyaya yashata akabva atiza. Manje ndini ndega ndasara pamba asi chave kundishungurudza ndechekuti ndakanzwa kuti sister yangu yave kugara kuRujeko nemurume wangu. Handichazivi zvekuita ndapererwa ini, ndibatsireiwo nemazano ndodii please? Comments welcome…
Ndakasvirwa nemuXhosa muJoburg – Musadherere maXhosa anoyamwa mboro mhani!
I CAUGHT COUNCILLOR BONKING MY WIFE IN HIS OFFICE
SHOCKING PICS: Dr Goto’s wife was caught cheating with Renias – See All Photos Here!